Somali News 08.19.21 | KWIT
Maamulka Biden ayaa shalay u qoray Reynolds isagoo leh xayiraadda waajibka ah waxay jabin kartaa sharci siinaya maalgelinta masiibada degdegga ah dugsiyada. Reynolds ayaa la weydiiyay maanta sababta ay ugu aragto maaskaro inay tahay “xumaanta” ardayda. Reynolds wuxuu ku jawaabay in mamnuucidda waajibaadka maaskaro ay ku saabsan tahay samaqabka bulshada iyo shucuurta ardayda.
CDC waxay ku talinaysaa in qof kasta oo dugsiyada dhigtaa maaskaro dayrtaan. Reynolds waxay sheegaysaa inay shaqadeeda gudanayso oo Biden ay tahay inuu isagu qabto, oo ay taa beddelkeeda xoogga saarto Afghanistan iyo xuduudda koonfureed.
Koox matalaysa inta badan guryaha dadka waayeelka ah ee Iowa ayaa sheegaya inay ka soo horjeedaan shuruudda cusub ee Madaxweyne Joe Biden ee shaqaalaha guriga kalkaalinta in laga tallaalo COVID-19.
Madaxweynaha Ururka Daryeelka Caafimaadka Iowa Brent Willett ayaa sheegay in guryaha kalkaalinta Iowa ay ka shaqeynayaan xarriiqyada shaqaalaha khafiifka ah. Willet wuxuu leeyahay wuxuu ka walaacsan yahay shuruuddan cusub inay ka sii darto.